Akụkọ - Olee otu tubes ga - esi dota igwe igwe anwuru?
Kedụ ka tubes ga - esi dota ogo igwe?
A na-eji roba eme roba n’ime ya ma na-agbanwe agbanwe. Ha yiri balloons na ọ bụrụ na ị na-agbanye ha, ha na-agbasawanye ruo mgbe ha mechara mebie! Ọ dịghị mma ịfefe tubes dị n'ime karịa nke nwere ezi uche ma gbakwunye ogo dị ka tubes ga-esighi ike ka ha na-agbatị.
Imirikiti akpa n'ime ga-ekpuchi oke taya abụọ ma ọ bụ atọ dịgasị iche iche, na nha ndị a ga-abụkarị akara na tube dị n'ime dị ka nha dịgasị iche, ma ọ bụ gosipụtara dị ka nso. Iji maa atụ: Enwere ike itinye akara ụgbọala na-adọkpụ ụgbọala dị ka 135/145 / 155-12, nke pụtara na ọ dabara maka nha taya nke 135-12, 145-12 ma ọ bụ 155-12. Enwere ike ịmịnye ahịhịa n'ime ahịhịa dị ka 23X8.50 / 10.50-12, nke pụtara na ọ dabara maka nha taya nke 23X8.50-12 ma ọ bụ 23X10.50-12. A traktọ n'ime tube nwere ike akara dị ka 16.9-24 na 420 / 70-24, nke pụtara na ọ kwesịrị ekwesị n'ihi na taya nha nke 16.9-24 ma ọ bụ 420 / 70-24.
ND THE KWES OFR OF AKW TKWỌ INTANET INTARES N'ime tube àgwà dịgasị iche si emeputa ka emeputa. Ngwakọta nke rọba roba, roba sịntetik, carbon ojii na ogige ọgwụ ndị ọzọ na-ekpebi ike tubes, ogologo oge na ogo ya. Na Nnukwu taya anyị na-ere ọkpọkọ dị mma sitere na ndị na-emepụta ihe anwalela ma nwalee ọtụtụ afọ. Kpachara anya mgbe ị na-azụ akpa dị n'ime site na isi mmalite ndị ọzọ n'ihi na enwere ụfọdụ akpa anaghị adị mma na ahịa ugbu a. Adịghị mma tubes mee elu mee na-eri gị ọzọ ma ala oge na-anọchi.
Kedu valvụ m chọrọ? Valves na-abịa n'ụdị & nha dị iche iche iji nweta ọtụtụ ngwa dị iche iche & nhazi usoro wiil. E nwere isi edemede anọ dị n'ime valvụ n'ime dị n'ime & n'ime nke ọ bụla bụ ọnụ ọgụgụ aka nke ụdị valvụ a ma ama iji họrọ: Valves Rubber Valves - A na-eji valvụ eme roba ka ọ dị ọnụ ala & na-adịgide adịgide. Valvụ TR13 bụ nke a na-ahụkarị, nke ejiri ụgbọ ala, ụgbọala na-adọkpụ, quads, igwe lawn na ụfọdụ igwe agri pere mpe. Ọ nwere eriri dị larịị ma kwụ ọtọ. TR15 nwere uzo buru ibu ma sie ike karie ya ka ejiri ya na wiil ndi nwere oghere uzo di elu, ihe kariri ugbo ala ma obu ihe omuma. Nnennen Metal Valves - A na-eji ígwè arụ ọrụ valvụ ahụ, yabụ dị ike & sie ike karịa ndị ibe ha roba. A na-ejikarị ha eme ihe na nrụgide dị elu, na mgbe enwere ihe ize ndụ nke valvụ na-ejide / kụrụ aka site na mbibi. Ejiri TR4 / TR6 na ụfọdụ quads. Ihe a na - ahụkarị bụ TR218 nke bụ valvụ agri ejiri mee ihe na ọtụtụ traktọ ka ọ na - enye ohere ballasting mmiri. Bent Valves Valves - A na-eji ígwè eme valvụ ahụ, ma nwee gbagọrọ agbagọ na ya nke ogo dị iche iche. Bend na-abụkarị iji gbochie valvụ ahụ ka ọ ghara ịdaba na ihe ize ndụ dị ka taya ahụ na-atụgharị, ma ọ bụ iji zere ya ịkụda wiilị ụkwụ ma ọ bụrụ na ohere dị oke. A na-ahụkarị ha n'ụgbọala na ihe eji eji igwe dị ka onktrucks, trolleys bag & wheelbarrows. Forklifts na-ejikarị valvụ JS2. Obere ígwè dị ka gwongworo na-eji TR87 eme ihe, na ụgbọ ala / gwongworo na-eji ụgbọ mmiri dị ogologo dịka TR78. Ikuku / Mmiri Mmiri - Valve TR218 bụ valvụ ígwè kwụ ọtọ nke na-enye ohere ka mmiri (yana ikuku) nwee ike ịmịpụta ya iji gbanye taya / igwe ballast. A na-ejikarị ha arụ ọrụ ugbo dịka traktọ.
AKW TKWỌ AKW FORKWỌ maka ỌZỌ NA-EGO - AKA NA-EKPERE, IWERE wdg. Yabụ ma ịchọrọ eriri dị n'ime maka mmiri na-ese n'elu mmiri, na-ewu ihe okike gị, ma ọ bụ maka ngosipụta windo ụlọ ahịa dị egwu, mgbe ahụ anyị nwere obi ụtọ inyere aka. Biko banye na ihe ị chọrọ na otu anyị ga-egosi gị n'ụzọ ziri ezi. Dị ka onye na-agbatị ngwa ngwa, kpebie etu ị ga - achọ ka oghere / oghere dị n'etiti etiti ahụ bụrụ (nke a na - akpọ nha rim ma atụ ya na Inches). Mgbe ahụ, kpebie etu ị ga - achọ ka ngụkọta dayameta nke ọkpọ ahụ dị (ịdị elu nke ọkpọkọ ahụ ma ọ bụrụ na ị kwụrụ ya n'akụkụ aka nri gị). Ọ bụrụ na ị nwere ike inye anyị ozi ahụ, anyị nwere ike ị nye ndụmọdụ maka ụfọdụ nhọrọ maka gị. Biko kpọtụrụ anyị maka enyemaka na ozi ndị ọzọ.